Soul land နိုဗယ် 181 3D ကာတွန်းအပိုင်း 148 - kokochitchit.xyz
March 8, 2021 ko ko knowledge 0
Soul Land နိုဗယ် အခန်း (၁၈၁) အကျဉ်းချုပ်
ယန်ဝူဒိ ထန်စန်းဆီက ပန်းကိုယူပြီး အားအပြည့်နဲ့ရှူသွင်းလိုက်တယ်။ ” ဟားဟား ဒီပန်းကို ငါတစ်ဘဝလုံး ရှာနေခဲ့တာ ဒီလိုမျိုး လွယ်လွယ်နဲ့ ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့မိဘူး နောက်ဆို ငါ ဘယ်အဆိပ်ကိုမှ မကြောက်ထိတော့ဘူး”။တိုက်တန်က ဒါဆို မင်း ထန်ဂိုဏ်းကို ဝင်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီးပေါ့။ ယန်ဝူဒိက သဘောတူတယ်၊ ငါသဘောတူတယ်။ မနက်ဖြန် ငါ့ရဲ့ဂိုဏ်းသားတွေကိုခေါ်လာပြီး ထွက်ခွာကြမယ်။နောက်တစ်မနက်တွင် လှည်းဘီး ၂၀ စီးလောက်ထွက်ခွာလာကြတယ်။ အသွားလမ်းက လဝက်ပဲ ကြာပေမယ့် အပြန်လမ်းက အရက် ၂၀ လောက်ကြာတယ်။အပြန်လမ်းမှာတော့ ရှောင်ဝူးရဲ့ အိပ်ချိန်က နည်းလာတယ် နောက်ပြီး အရွက်စိမ်တွေကိုစားပြီး သာမန်လူပုံစံလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ထန်စန်းကို ခေါင်ကိုက်စေတာတစ်ခုက ရှောင်ဝူးက အဝတ်စားဝတ်ရတာကို မကြိုက်ဘူး ကိုယ်လုံးတီးပဲ နေချင်နေတာ။ ဒါကြောင့် ထန်စန်းက ရီးရမလား၊ ငိုရမလားမသိ အခက်တွေ့နေတယ်။လမ်းမှာတော့ထန်စန်း ရှောင်ဝူးကြိုက်တဲ့ အဖြူရောင်အဝတ်တစ်စုံဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ နောက် ဖက်တီးက အကို ၃ ကျွန်တော်တို့ ရှီလာခေ့ကျောင်းကို အရင် ပြန်ကြမလား? ဆရာတို့ ရှောင်ဝူးကိုတွေ့ရင် သူတို့ပျော်ကြမှာ။ ထန်စန်း ၊ ရှောင်ဝူးနဲ့ ဖက်တီတို့ ကျောင်းအဝကို ရောက်လာသောအခါ ဝိဥာဉ်းမာစတားတွေ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။
ထို့နောက် ဖက်တီးက ဘေးကကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဆွဲခေါ်ပြီး “ဒီမှာ ဘာဖြစ်လို့လူတွေများနေရတာလဲ၊ ဘာလို့သူတို့နေ့လယ်စာ မစားကြသေးတာလဲ”ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်။စီနီယာတို့ရောက်လာတာအတော်ပဲ ဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်က ပြဿနာလာရှာနေတာ။သူတို့ကတော့ ဒြပ်စင် ၄ပါးဂိုဏ်း၄ဂိုဏ်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့လူအယောက်၃၀ လောက်ခေါ်လာကြပြီး လက်ရည်ပြိုင်ကြမယ်လို့ပြောတယ်။ ထန်စန်းမျက်နှာ ကြုတ်သွားပြီး ဖလန်ဒါနဲ့ ဂရမ်မာစတား ဆရာတို့ရောဘယ်ရောက်သွားကြလဲ၊ ဒီမှာ အကြီးအကဲတစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလား? ထိုကျောင်းသားက တာရှီဆရာမရှိဘူး၊ ဖလန်ဒါ ၊ အာလုန်နဲ့ ကျောက်ဆရာတို့လဲ အဆင့် ၃၀ ရောက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဝိဥာဉ်းကွင်း သွားရှာပေးနေကြတယ်။ ဖက်တီးက အကိုစန်း သူတို့ရဲ့နောက်ခံက ဝိဥာဉ်းနန်ဆောင်က ဖြစ်နေမလား? ထန်စန်းက မဟုတ်ဘူး ဒီ ဒြပ်စင် ၅ ကျောင်းထဲမှာ ဆင်ချပ်ဝတ်တန်ဆာကျောင်းတစ်ခုပဲ ဝူဟွမ်ကျောင်းရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်နေတာ။ဖက်တီး ကျောင်းသားတွေ လမ်းဖယ်ပေးရန်အော်လိုက်တယ်။ ဖက်တီး အသံကျယ်ကြီး ရယ်ပြလိုက်ပြီး ” ဟားဟား ငါက ဘယ်သူတွေလဲလို့ ထင်နေခဲ့တာ လက်ဆက်သတ်တော့ ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေပဲကို ဘာလဲ မင်းတို့က ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးထားလို့ အခု ပြန်လာတိုက်ခိုက်ချင်နေတာလား?”
ဒြပ်စင် ၄ကျောင်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုခေါင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဖန်ရှောင်ထင်က ဖက်တီးကို တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ” မတွေ့တာ ကြာပြီးနော် မာဟုန်ကျန်၊ အို ရှောင်ဝူးလဲရှိနေတာပဲ၊ အဖွဲ့ထဲတစ်ခြားကျန်နေတဲ့သူတွေရော ဘယ်မှာလဲ?” ထန်စန်း ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့ထန်စန်းကို မမှတ်မိကြတော့ဘူး။ဖန်ရှောင်ထင်က ငါတို့ ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးသွားလို့ ဒီကို လာကြတာမဟုတ်ဘူး ဒီကောင်ကင်ဒူမြို့က ငါတို့ ကျောင်း ၄ ကျောင်းကို ဖိတ်လိုက်လို့ ဒီကိုရောက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီကျောင်းက ကျောင်းသားတွေ ငါတို့က သူတို့ကို လာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ် ဒါကြောင့် ငါဘာမှ မတက်နိုက်ဘူး။ ဖက်တီးက” မင်းတို့ မတိုက်ခိုက်ရင် ဘာလို့ ဂိတ်ဝက ကျောင်းသားတွေ ဒဏ်ရာရနေတာလဲ?ဖန်ရှောင်ထင်က .အဲတာက နားလည်မှုလွဲတာပါ”။ ဖက်တီးက “အဲဆို ငါလဲ မင်းတို့ ကျောင်းသားကို တိုက်ခိုက်ရင် နားလည်မှုလွဲတယ်လို့ ယူဆလို့ရလား?”။ မီးတောက်ကျောင်းရဲ့ ဒုခေါင်ဆောင် ဖြစ်တဲ့ ဟူဝူမိန်းကလေးက “ဒါဖြင့်ရင် နင်တို့ ရှီလာခေ့ မွန်းစတာတွေနဲ့ ငါတို့ကျောင်းနဲ့ ပြိုင်ကြရအောင် ရှုံးသွားတဲ့လူက တောင်းပန်ရမယ်။” “အဲနောက် အော်စကာနဲ့ ရုန်ရုန်တို့ လက်ကိုင်ပြီး လျှောက်ဝင်လာကြတယ်။ “ရှောင်ဝူး “..ရုန်ရုန် အော်ပြီး ပြေးလာတယ်။အောစကာက “ထန်စန်း ရှောင်ဝူးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ”။ ထန်စန်းက အဲတာ ဆေးဖက်ဝင်တစ်ချို့ကြောင့်ပါ။ သူ့ရဲ့ဝိဥာဉ်းတော့ မရှိသေးဘူး။ အဲနောက်အောစကာက ဖန်ရှောင်ထင်ကို ကြည့်ပြီး” ငါတို့တိုက်ခိုက်တာကို လက်ခံတယ်။ “
ဖန်ရှောင်ထင်ပြုံးပြပြီး” ဒိုင်မူပိုင် ၊ ကျူကျူချင်းနဲ့ ထန်စန်းတို့ ဒီမှာ မရှိကြဘူး။ အဲကြောင့် မင်းတို့အပေါ် ငါတို့အမြတ်မထုတ်ချင်ဘူး ၄ vs ၄ တိုက်ကြမယ် အိုခေလား?” အောစကာက ၃ vs ၃ တိုက်မယ်။ ဖန်ရှောင်ထင်နဲ့ မီးတောက်ကျောင်းရဲ့ခေါင်ဆောင်နဲ့ ဒုခေါင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဟူဝူရှန်နဲ့ ဟူဝူ တို့ အရှေ့ကို ထွက်လာကြတယ်။ထန်စန်းက “ရှောင်ဝူးလေး ရုန်ရုန်နဲ့ နေခဲ့နော် ခနနေ ကိုပြန်လာမယ်။” ထန်စန်းက အော်စကာနဲ့ ဖက်တီးကို ကြည့်ပြီး ” သွားရအောင်”. ကွင်းအလယ်မှာတော့ ၃ vs ၃ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်နေကြတယ်။ အဲနောက် ဟူဝူကထန်စန်းကို ကြည့်လိုက်ပြီး ” ငါတို့က ရှီလာခေ့ မွန်းစတာတွေနဲ့ တိုက်ချင်တာ အပြင်က ငှါးလာတဲ့သူနဲ့ တိုက်ခိုက်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။” ထန်စန်းက ” ကိုဖန် မတွေ့တာတောင်ကြာပြီးနော်” ဖန်ရှောင်ထင် ရှော့စ်ဖြစ်သွားပြီး ” မင်းငါကို သိနေတယ်?” ထန်စန်းပြုံးပြလိုက်ပြီး ” ဒီ ၅ နှစ်အတွင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ရုပ်ရည် ပြောင်းလဲသွားလို့ လူတွေ မမှတ်မိကြတာ ကျတော်က ထန်စန်းပါ”.” ဘာ.. မင်းက ထန်စန်း? ၅ နှစ်တောင်ရှိသွားပြီး မင်းဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဆိုတာ ငါသိချင်တယ် လာ.. ငါတို့ တစ်ပွဲချလိုက်ရအောင်”။ ထန်စန်းက အကိုဖန်က ဒီ ဒြပ်စင် ကျောင်း ၄ ကျောင်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုလား? တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင် ကိုတို့ ၄ ကျောင်းလုံး ဒီကျောင်းကို မလာကြ နဲ့။ဖန်ရှောင်ထင်က ” မင်းကိုယ်မင်း တော်တော်ယုံကြည်မှု ရှိနေပါလား”?
ထို့နောက် ထန်စန်းက ဖန်ရှောင်ထင် တုံ့ဆိုင်းနေတာကို တွေ့၍ ဒါဖြင့်ရင် ခင်ဗျာတို့ ၃ ယောက်လုံးကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲပဲ ရင်ဆိုင်မယ် တကယ်လို့ ကျတော် ရှုံးခဲ့ရင် ကြိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမယ့် ခင်ဗျာတို့ ရှုံးသွားရင်ဒီရှီလာခေ့ကျောင်းကနေထွက်သွားပြီး ဘယ်တော့မှ မလာကြနဲ့ အိုခေလား?
ဟူဝူ ဒေါသထွက်ပြီး “ကောင်းပြီး ထန်စန်း နင်ကို ၅ နှစ်လောက်မတွေ့လိုက်ရတာ တော်တော်ခေါင်မာလာတာပဲ နင်းပြောတာ နင်းရှုံးရင် ကြိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးဆိုတော့ နင်းကို ငါ့ရဲ့ ကျွန်လုပ်ခိုင်းမယ်။” ထန်စန်းက ” မင်းငါ့ကို နိုင်ဖို့ အရည်ချင်းရှိခဲ့ရင်ပေါ့”။ ဖန်ရှောင်ထင်က “ကောင်းပြီး ငါတို့သဘောတူတယ်”။ အောစကာ ထန်စန်းကို ပြောရန်လုပ်နေချိန်မှာ ဖက်တီးလက်ဆွဲလိုက်တယ်။ညီအကိုတွေရဲ့တစ်ယောက်အထာ တစ်ယောက်သိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အောစကာရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ လျှော့ကျသွားတယ်။ အဲနောက် ဖန်ရှောင်ထင်းရဲ့ အနောက်ကနေ ခေါင် ၂ လုံးနဲ့ မြေခွေးဝိဥာဉ်းထွက်လာပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ အဆင့် ၆၁ ဝိဥာဉ်းကွင်း ၆ ကွင်း ထွက်လာတယ်။ဟူဝူနဲ့ သူမရဲ့ အကို ဟူဝူရှန်တို့မှာလဲ အဝါ ၂ ကွင်း ခရမ်း ၂ ကွင်းနဲ့ အမဲ ၁ ကွင်း သူ့မရဲ့ဝိဥာဉ်းကတော့ မီးဒြပ်စင်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဟူဝူမိန်ကလေးက ထိန်းချုပ်ဝိဥာဉ်း အဆင့် ၅၄ ဖြစ်ပြီးတော့ ဟူဝူရှန်က အဆင့် ၅၃ တိုက်ခိုက်ဝိဥာဉ်းတို့ ဖြစ်ကြတယ်။ ဟူဝူထန်စန်းကို ကြည့်လိုက် ပြီး ” ဘာလဲ နင်က အရှုံးပေးချင်လို့ ဝိဥာဉ်းကွင်း မထုတ်သေးတာလား?”။ ထိုအချိန်မှာပဲ ထန်စန်း ကိုယ်ထဲကနေ ဝိဥာဉ်းကွင်းထွက်လာတယ် အဝါ ခရမ်း အမဲ အနီ ထန်စန်းရဲ့ ၆ ခုမြောက်ဝိဥာဉ်းကွင်းကြောင့် ပြိုင်ဖက်တွေရော တစ်ကွင်းလုံးပါ တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ ထန်စန်းက “အဆင့် ၆၆ ထိန်းချုပ်မှု ဝိဥာဉ်းဘုရင်, ကျေးဇူးပြုပြီးတော့…. “